Layma's World: “အလှ”အကြောင်း….ကြားခဲ့ရတဲ့ စနေ ၊ တနင်္ဂနွေ
J.Ruskin ၏ Architecture is the rightly placing of sculptures and paintings. ဟူသောအယူအဆ ၊ A. Loos ၏ Ornamentation is Crime ဟူသောအယူအဆ ၊ Do not construct the decoration . Decorate the construction . ဟူသော အတွေးအခေါ်များနှင့် အတူ ၊ စွမ်းအင် အလဟသမဖြစ်စေသော ၊ ပတ်ဝန်းကျင် ကို မထိခိုက်စေသော ဒီဇိုင်းများဖြစ်ရန် ဗိသုကာများတွင် တာဝန်ရှိကြောင်း အသိတရားများနှင့် .....Regional character, National character စသောလက်ရာဟန်များ အကြောင်း တွေးတောစရာ တပွေ့ တပိုက်နှင့် …..၁၈ ရာစုနှစ်သည် ကမ္ဘာမှာ ဗိသုကာပညာ အနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရသော အချိန်ဟူသော ဆရာ၏ စကားတခွန်းကို အထပ်ထပ် ကြားယောင်ရင်း ကမောက်ကမ တွေးနေကျ အတွေးတွေနဲ့ ……၊ မြန်မာမှာ လက်ရှိ သွားနေတဲ့ Architecture trend ဟာ Client-architecture ပါလို့ပြောသွားတဲ့ သုံးသပ်ချက်တခုကို အပြန်ပြန် အလှန်လှန် စဉ်းစားရင်း…..လေးမ အိမ်ပြန်ခဲ့ပါသည်….။
Posted by Layma at 11:35 PM
အန်...လေးမက Facial Foam for men ကို ၀ယ်တယ်ဆိုတော့ လေးမက male or female ?? မန်းချယ်ရီမှာတော့ ကိုယ်တို့ ကျောင်းတက်လာတဲ့ တော်ကလှောက်တော့ ယောက်ျားလေး အဆောင်အဖြစ် ပြောင်းတာတော့ မတွေ့ရ...။ ပြောတတ်ဖူ... နောက်ပိုင်း ဂျူနီယာတန်းတွေမှာ ယောက်ျးလေး အဆောင်မလောက်ရင်တော့ ဖြစ်နိုင်လောက်တယ်...။
brother ရဲ့ blog link လေးပေးပါဦး...။ လေးမ က female...ပါ...။ for men ကတော့ for man ပေါ့...။ လေးမရဲ့ ဒုတိယ အသက်အတွက် ၀ယ်တာလေ..။
ပျင်းပျင်း ရှိတာနဲ့ ကြည့်ဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်လေးများ အကြောင်းတွေ တင်ထားတဲ့ ကချော်ျကချွတ် ဘလော့ဂ်တော့ ရှိပါ့...။ လေးမကြည့်ချင်သပဆိုတော့လဲ ရှက်ရှက်နဲ့ ပြရမှာပေါ့လေ...။